Casharrada Photoshop: Sida loogu adeegsado isla saamaynta dhowr sawir | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carretero | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada, dhowr
Sawirka I: Kani waa mid ka mid ah sawirrada muuqaalka muuqaalka ah ee aan doortay inaan ku horumariyo casharrada
Taasi Adobe Photoshop waa barnaamij aad u dhameystiran waa wax aan wada ognahay. Horumarinta farsamada ee barnaamijyada daaweynta ee sawirada, ayaa u maleynayay kacaan wax soo saarka garaafka in lagu horumariyo adduunka tobankii sano ee la soo dhaafay. Taasi waa sababta ay u jiraan kumanaan bog oo u heellan inay iskudayaan inay sharxaan hawlgalka barnaamijka Casharrada iyo video Casharrada, mararka qaarna ka weyn iyo kuwa kale oo ka lib yar.
Taasi waa sababta aan u bilaabayno bixinta taxane ah Casharrada barnaamijkan weyn, kaas oo aan wax kaga badali doonno bogag kale, anagoo barinayna waxyaalaha lagama maarmaanka u ah adeegsiga barnaamijka, laga bilaabo isticmaalka saxda ah ee qalabka ilaa sida loola tacaalayo qulqulka shaqada, iyadoo loo marayo hal abuur kale oo diirad saaran farshaxanka dhijitaalka ah. Maanta waxaan kuu keenay a tutorial Photoshop: Sidee loo codsadaa isla saameynta dhowr sawiro ku shaqeeya kooxo.
Awooda Photoshop, shaki kuma jiro, si kastaba ha noqotee marar badan by jahliga sababta Ulama shaqeyno si sax ah, isaga oo kala goynayna jahwareerkeena ku dhashay ogaal la'aanta, inaan ka shaqeyno dhowr heerar oo ka hooseeya marinka awooddiisa. Barnaamijka waxaa loo sameeyay inuu awood u yeesho inuu yeesho astaamo horumarineed iyadoo loo eegayo baahiyaha aan qabno, waxay kuxirantahay astaanteena xirfadeed (uma adeegsan doono Photoshop kartooniste marka loo eego soo saaraha webka), oo sidaasna u hubiya qaar socodka shaqada ama dhaqdhaqaaqa wax soo saar badan leh, iyadoo barnaamijka loo nidaamiyay. Barnaamijka dhexdiisa waxaa ku jira kooxo dhowr ah iyo kooxo hoosaadyo qalab ah, waxaana jira dhowr ujeeddadeed oo looga dhigayo socodsiinta shaqooyinka inay noqdaan kuwo waxtar leh, waqti iyo hawl u badbaadiya xirfadlaha adeegsada.
Kooxdan qalabka ah dhexdeeda, waxaa jira mid si gaar ah waxtar u leh haddii ay tahay inaad si isku mid ah u siiso daaweyn dhowr sawir ah, maadaama ay kuu oggolaaneyso inaad ku shaqeyso sawiro adigoon mid mid u qaban. Tani waxay awood u leedahay inay fududeyso shaqada haddii kale noqon lahayd maalmo ama toddobaadyo illaa dhowr daqiiqo ama mararka qaarkood ilbidhiqsiyo (waxay kuxirantahay waxa kombiyuutarkaagu awoodo inuu sameeyo)
Sawirka II: Tallaabada ugu horreysa waa in la abuuro laba fayl
Si loo awoodo in lala shaqeeyo aaladda Gawaarida gawaarida, waa inaan helnaa sawiro in aan dooneyno in aan ku shaqeyno gal, oo aan gal kale u diyaarsano in aan helno sawirada horey loo shaqeeyay. Si tan loo sameeyo, waxaan abuuri doonnaa dhowr fayl (sawirka aniga), oo loogu magac daray tusaale ahaan: Sawirro dib loo kaydiyo y Sawirro horeyba dib loogu soo celiyay.
Sawirka III: Si aad tusaale ahaan ugu isticmaasho, soo dejiso sawirro taxane ah (xuquuq la'aan), oo ku rido galka Sawirada si aad dib ugu hagaajiso
Waxaan soo dejiyey ilaa 4 ama 5 sawiro oo ku saabsan muuqaalka dhirta galka Sawirro dib loo kaydiyo, halkaasna waxaan ka bilaabi doonnaa shaqo.
Sawirka III: Wadada loo maro qalabka.
Marka ugu horeysa, waa inaan ogaanno nidaamka aan rabno inaan ku dabaqno sawiro o sawirada waxa aan hayno. Otomaatiga ay na siiso Photoshop, asal ahaan waxay ka timaaddaa codsashadeeda si ay u fuliso ficil ku saabsan mawduuc una gudbiso fayl kale, ka dib markii dib loo beddelo magaca sawirada. Tani waxay ka dhigan tahay inaan kaliya shaqadeyn karno shaqadeena haddii aan horey u soo saarnay ama u dooranay ficil oo aan ugu keydinay koox falal ah. Waxaan aadi doonnaa aaladda raacaysa dariiqa feyl-otomaatigga ah, halkaasna waxaan ka fureynaa liiska qalabka uu noqon doono meesha aan u qaabeyneyno inuu si otomaatig ah ugu shaqeeyo.
Sawirka IV: Natiijada kama dambaysta ah ee waxqabadka loogu talagalay dufcadda.
Mar sanduuqa menu qalabka, waxaan haysan doonnaa dhowr waxyaalood oo aan ku hagaajinno:
ciyaaro: Xulashada iyo ficillada la dejiyey, waa halka ay tahay inaan ka dooranno kooxda ficillada aan ka dooran doonno ficilka aan dooneyno inaan ku dabbaqno sawirada, taas oo aan ku qasbanaan doonno inaan ku raranno daaqadda saamiyada laga bilaabo menu-keena qalabka, iyo tallaabada aan dooneyno inaan ku dabbaqno sawirrada ku jira gudaha galka. Ficilkani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kuwa keena Photoshop guriga, laga soo dejiyey internet ama innaga ayaa abuuray.
AsalkaDoorashadan, waxaan ka dooran doonaa meesha barnaamijku ku qaadanayo sawiro si loo farsameeyo, taas oo ka imaan karta galka (kiiskan Sawirro dib loo soo celinayo, oo aan horey u sii diyaarinay), kaas oo ay ku codsan doonto dariiqa, aalad sida kamarad dijitaal ah, illaa qaar sawirada furan, ama ka Adobe Bridge. Waxaan sidoo kale xakameyn karnaa howlaha laga yaabo inay ku yar yihiin ficil ahaan, sida keydinta ama sanduuqyada wadahadalka.
GoobIkhtiyaarigan waxaan ku dooran doonaa galka heli doona sawirada horey loo cusbooneysiiyey, sidoo kale waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan magacyadaas ugu bedelno sida aan dooneyno iyo kordhinta aan dooneyno, oo ay ku jiraan tiro wanaagsan oo ikhtiyaarro ah oo horay loogu sii dejiyey sida taariikhda qaabab, lambarro taxane ah, iwm.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ii sheeg meesha laga soo galo oo waan kuu caddaynayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tababarka Photoshop: Sida loo adeegsado isla saamaynta dhowr sawir oo ka hawlgala dufcado
Haye subax wanaagsan. Shaqadayda 'CS CS5' waxaan ku helayaa feylka ikhtiyaariga ah> otomatiga> dufcadda (laakiin dufcaddu uma muuqato mid u qalma) ama haddii si kale loo dhigo ma dooran karo ikhtiyaarkaas, ma ogtahay waxa dhaca?